ဖေဖော်ဝါရီလ ဒုတိယအပတ် ယင်းတလဲဘာသာ ရေဒီယို - Kantarawaddy Times
အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့ည (၇) နာရီ တင်ဆက်နေကျ ယင်းတလဲ ရေဒီယိုအစီအစဉ်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၅) ရက်
၁။ ကယားပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် ခန့်အပ်ရာမှာ နှစ်ဦးစလုံးငြင်း ဆိုတဲ့ သတင်း
၂။ အာဏာရှင်ဖီဆန်တဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်တဲ့ ထွေအုပ်ဝန်ထမ်း နှစ်ဦးကို တာဝန်မှရပ်စဲ စတဲ့ သတင်းတွေ နဲ့အတူ (ရေမရမှာပူပန်နေရသလို မြေးတွေငတ်မှာလည်း စိုးရိမ်နေရတဲ့ အဖွား) ဆိုတဲ့ဆောင်းပါး အပြင် စာပေကဏ္ဍ အနေနဲ့ ခုဘန့်ရိုင်းရေးသားပြုထားတဲ့ `ဆင်နဲ့ မျောက် ပညာချင်းပြိုင်တယ် ဆိုတဲ. ပုံပြင်အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.
Previous articleကယားပြည်နယ်ထွေအုပ်ဝန်ထမ်း ၂၀ ဦးကျော်မှ CDM လုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်လာ၊ အဆုံးထိလုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုဆို
Next articleမြို့နယ် ၃မြို့နယ်မှစိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်းတွေက အာဏာသိမ်းမှုကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ဖဲကြိုးနီဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု ပြုလုပ်